Anya maka anya moon - Sodium potassium aluminom silicate - Video
Anya anya nke anya nke Cat
Tags Cat anya, Moonstone
Zụta oke igwe ojii na ụlọ ahịa anyị
Cat cat moonstone bụ sodium potassium aluminom silicate ma bụrụ nke ndị otu feldspar.
Aha ya sitere na mmetụta ya, ma ọ bụ sheen. Ọ na-abịa site na mgbagwoju anya nke ọma n'ime ihe ntanetị nke na-agụnye ntụpọ feldspar mgbe nile.
Ejirila cat anya anya moonstone na ọla maka millennia, gụnyere mmepeanya oge ochie. Ndị Rome nwere mmasị na moonstone, dịka ha kwenyere na ọ sitere na ụzarị ọnwa siri ike nke ọnwa. Ma ndị Rom ma ndị Grik jikọtara moonstone na chi dị iche iche nke ọnwa. N'ime akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịbeghị anya, moonstone ghọrọ ihe a ma ama n'oge Art Nouveau, onye na-akpụ ọla ala French bụ René Lalique na ọtụtụ ndị ọzọ mepụtara ọla buru ibu na iji okwute a.
The kasị moonstone bụ nke ịnweta adularia, aha ya bụ n'ihi ihe n'oge Ngwuputa saịtị nso Mt. Adular na Switzerland, ugbu a n'obodo St. Gotthard. The plagioclase feldspar oligoclase na-emepụtakwa moonstone ụdị. Moonstone bụ feldspar na a pearly na opalescent schiller. Otu ọzọ aha ya bụ hecatolite.
Abụọ na osisi feldspar mejupụtara anya nwamba nwamba. Orthoclase na kwa albite. Thedị abụọ ahụ na-etinye ọnụ. Mgbe ahụ, dị ka mineral ọhụrụ e guzobere ọhụrụ na-ajụ oyi, ngwakọta nke orthoclase na albite na-ekewa n'ime akpa, ọzọ na-aghọrọ. Mgbe ìhè dara n'etiti oghere ndị ahụ dị larịị, ọ na-agbasasị n'ọtụtụ ụzọ na-emepụta ihe a na-akpọ adularescence.
Cat anya moonstone chatoyancy
Igwe ntụrụndụ ma ọ bụ pusi anya, ọ bụ mmetụta nlele anya. A na-ahụ ya na nkume ụfọdụ. Anya anya nke anya na-esite n'ụdị nsị nke ihe a na-ahụ anya, dịka nke quartz anya nke agịgị, ma ọ bụ site na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe dị n'ime nkume, dịka anya na chrysoberyl anya. Ihe na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu okwu na chrysoberyl bụ ọ bụ ịnweta. Ọzọkwa, nyochaa ihe atụ adịghị enye ihe àmà nke tubes ma ọ bụ ụrọ. Mkpa ahụ niile kwadoro na-adabere na nlele anya. A na-eche na ngwugwu kachasị elu nke egwuregwu ahụ bụ naanị otu n'ime akịkị kpakpando atọ nke ọkpụkpụ chrysoberyl, nke mere na ọ ga-eme ka nhazi dị na ntụziaka ahụ.